Mogadishu Journal » Arsenal 2-1 Liverpool: Champions ayaa seegi doonan dhibcaha rikoorka ah ka dib guuldaradii Arsenal
Khaladaadka ka yimid Virgil van Dijk iyo Alisson ayaa xaqiijiyey in kooxda difaacaneysa Premier League Liverpool garoonka Emirates Stadium.
Liverpool ayaa aragtay rajadeeda ah inay gaaraan rikoor rikoor ah oo Premier League ah oo ay ku xasuuqday Arsenal madaama labo qalad ay noqdeen guuldaradii 2-1 ee soo gaartay kooxda heysata horyaalka. Reds ayaa u baahneyd ugu yaraan hal dhibic si ay ugu sii jirto iyada oo fursad u heysata inay barbareeyaan 100-ka dhibic ee Manchester City labo xilli ciyaareed ka hor, iyo rajada ay ka qabaan inay gaaraan 102 waxaa sii xoojiyay furitaanka Sadio Mane. Si kastaba ha noqotee, goolal aan fiicneyn oo ka yimid Virgil van Dijk iyo goolhaye Alisson ayaa arkay Gunners oo gadaal ka soo socota madaama ay guushii axada ka soo gaartay kooxda ay xafiiltamaan ee Tottenham. Alexandre Lacazette ayaa barbareeyay halka Reiss Nelson uu dhaliyay goolkiisii ​​ugu horreeyay ee Premier League ee uu kaga tago Liverpool isagoo leh 93 dhibcood iyadoo kaliya labo kulan ay harsan tahay. Waxaa jiray digniin hore oo ku saabsan caddeyntii Emiliano Martinez markii Roberto Firmino uu ku eedeeyay mid ka mid ah iskudayadiisa oo kubada ku horjoogsaday kubad. Toban daqiiqo ka dib, Martinez ayaa mar kale xanuunsaday oo Liverpool ayaa kubbada ka soo celisay laadkeeda, iyadoo Firmino uu sii daayay Andy Robertson si uu u dhex galo Mane, kaasoo dhameystiray waqtigiisii ​​ugu horreeyay ee uu siiyay Reds daqiiqadii 20aad ee ciyaarta. Sikastaba, Arsenal ayaa si dhaqso leh ciyaarta u weecisay kadib qaladaadkii Van Dijk iyo ka dib Alisson. Marka hore, Van Dijk, cadaadis uu saaran yahay Nelson, ayaa ciyaaray baas aan caadi aheyn oo u dhexeeyay Fabinho iyo Alisson, taasoo u oggolaaneysay Lacazette inuu awood u yeesho inuu barbareeyo ciyaarta.
Alisson ayaa ku xigay ka dib markii uu si qatar ah u dhiibtay kubad haysashada, Lacazette ayaa mar kale kubad gacanta ku taabtay isla markaana kubad u dhex dhigay Nelson si uu u siiyo Gunners hogaanka ciyaarta kahor. Liverpool ayaa ku dhawaad ​​dib u dhacday bilowgeedii labaad markii Mohamed Salah, oo u saftay kulankiisii ​​150aad ee kooxda, uu ag fadhiyo David Luiz isagoo ku qeylinaya ka hor inta uusan u dhaqaaqin goolka kaliya si uu u arko Martinez oo karoos ka soo tuuray. Jurgen Klopp ayaa keydka ugu yeedhay Takumi Minamino, ka dib markii uu kubad shabaqa dhex dhigay, xiddiga heerka caalami ee dalka Japan wuxuu dareemay inay aheyd inuu rigoore galo markii cadaadiska Kieran Tierney uu si xun u ciqaabay. Saalax ayaa markaa madax madax daciif ah toos ugu diray Martinez, Mane wuxuu fursad weyn u fidiyay Trent Alexander-Arnold dadaalkiisa shanaad ayaa la badbaadiyay iyadoo Liverpool ay aragtay fursada ay u laheyd inay boqolaal marayaan.